काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा १५ दिन थपियो, केके भयो परिवर्तन ? – hamrosandesh.com
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा १५ दिन थपियो, केके भयो परिवर्तन ?
काठमाडौं जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण झन तीव्र गतिमा बढिरहेको ठहर गर्दै निषेधाज्ञाको अवधिलाई जेठ १२ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना महामारी ब्यापक भएपछि सरकारले पहिलो चरणमा यही बैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरेकोमा उक्त अवधि बढाएर बैशाख २९ सम्म पु¥याइसकिएको छ । अब निषेधाज्ञा जेठ १२ गतेसम्म जारी रहने छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित । एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले जेठ १३ गतेबाट सञ्चालन हुने एसईई र जेठ २६ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्को सूचना नभएसम्मका लागि दुवै परीक्षा स्थगित गरिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले जानकारी दिए ।
यस्तो छ संसदको अवस्था : कोरोना भएका सांसदलाई अलग्गै टेन्ट, नभएकाहरु धमाधम भवनमा छिर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विश्वासको मत लिने भएकाले धेरैको नजर यतिखेर संसद भवनतिर छ। नेकपा विघटन, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भित्रको चर्को खिचातानीका कारण ‘अल्पमत’मा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि आज ‘परीक्षा’ दिँदैछन्।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सुरु भएको अस्थिरताको राजनीतिले आज नयाँ मोड लिँदैछ। राजनीति थप संक्रमणतिर जानेक्रम भएकाले सबैको चासो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रतिर खिचिएको छ। के छ त त्यहाँको अवस्था?
यतिखेर सांसदहरु संसद भवन आउनेक्रम सुरु भइसकेको छ। संसद आएका सांसदहरुले पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट देखाउँदै भित्र प्रवेश पाइरहेका छन्। उनीहरुको रिपोर्ट हेर्नेहरु पीपीई लगाएर तैनाथ छन्।
सांसदहरु पनि कोभिड १९ संक्रमित भएका छन्। तर, उनीहरु आज प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतदान प्रकृयामा सहभागी हुँदैछन्।
त्यसैले संसद सचिवालयले बाहिर टेन्ट राखेर कोभिड १९ पोजेटिभ भएका सांसदहरुलाई आइसोलेट भएर बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। रिपोर्ट पोजेटिभ भएका सांसदहरु संसद भवन परिसरको टेन्टमा छन्। अरु भने रिपोर्ट देखाउँदै भित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। आज उपस्थित सांसदहरु मध्ये धेरैले दुईवटा मास्क लगाएको देखिन्छ।
संसद भित्रजस्तै बाहिर कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोट आफैँ परिसरमा उपस्थित भइरहेको देखिन्थ्यो। संक्रमणको सकसकै बिच संसदमा आज भोटिङ हुँदैछ।